China Carbomer1342 ifektri abakhiqizi | Yinuoxin
ICarbopol, eyaziwa nangokuthi i-carbomer, iyi-resin enqamula i-acrylic enqamulelwe ne-acrylic acid nge-pentaerythritol njalonjalo. Kungumlawuli we-rheology obaluleke kakhulu. Ngemuva kokuncipha, i-Carbomer iyi-matrix enhle kakhulu ye-gel enokuqina, ukumiswa nokunye ukusetshenziswa okubalulekile. Inenqubo elula nokuzinza okuhle. It is kabanzi emulsion, ukhilimu kanye gel.
Igama Lamakhemikhali: Inhlanganisela ye-Polyacrylic Acid Resin
Isakhiwo Semolekyuli: - [-CH2-CH-] UN-COOH
Ukubukeka:impuphu emhlophe emhlophe
PH Inani: 2.5-3.5
Okuqukethwe umswakama%: ≤2.0%
I-viscosity: 20000 ～ 40000 mPa.s
Okuqukethwe kwe-Carboxylic acid%: 56.0-68.0%
I-Heavy Metal (ppm): 20ppm
Ama-Solvents asalayo%: ≤0.2%
Izici: Inomphumela wokuqina kahle kakhulu futhi ingakhiqiza amanzi acwebezelayo noma ijeli yamanzi otshwala, futhi ingamelana kahle ne-ion.
Ububanzi Bokufaka Isicelo:Luhlelo lokulethwa kwezidakamizwa ngokwengxenye futhi lunomphumela we-polymerization-and-emulsification. Emvelweni we-electrolyte, futhi kuyisimo esihle sokuguqula i-rheology.
I-Carbomer - Ukukhonjwa
Thatha umkhiqizo u-0.1 g, engeza amanzi angama-20ml no-10% isixazululo se-sodium hydroxide 0.4ml, lelo ifomu le-gel.
Thatha u-0.1g walo mkhiqizo, engeza u-10ml wamanzi, unyakazise kahle, engeza isisombululo senkomba eluhlaza okwesibhakabhaka esingu-0.5ml, kufanele sibe owolintshi. Thatha u-0.1 LG walo mkhiqizo, engeza amanzi ayi-10 ml, unyakazise kahle, engeza isisombululo senkomba ebomvu ye-cresol engu-0.5 ml, kufanele kube phuzi.
Thatha u-0.lg walo mkhiqizo, engeza u-10ml wamanzi, ulungise inani le-pH libe ngu-7.5 ngesisombululo se-lmol / L sodium hydroxide, engeza u-2ml wesisombululo esingu-10% se-calcium gasification ngenkathi unyakazisa, bese uveza ngokushesha imhlophe emhlophe.
I-infrared absorption spectrum (umthetho jikelele 0402) walo mkhiqizo kufanele ube nokumuncwa kwesici enombolweni yamagagasi engu-1710cm-1 ± 5cm-1, 1454cm-1 ± 5cm-1, 1414cm-1 scrrt1, 1245cm-1 ± 5cm-1, I-1172cm-1 ± 5ccm-1, 1115cm-1 ± 5citt1 ne-801cm-1 ± 5citt1, phakathi kwayo okuyi-1710cm-1 enokumunca okuqine kakhulu.
Ukupakisha Indlela: 10kg ibhokisi
Ikhwalithi ejwayelekile: I-CP2015
Impilo eshalofini:iminyaka emithathu
Isitoreji Nokuhamba: Lo mkhiqizo awunabuthi, ulangazelela ilangabi, njengokuthunyelwa okujwayelekile kwamakhemikhali, okuvaliwe nokugcinwa endaweni eyomile.
Amazwi:Inkampani yethu iphinde inikeze izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yochungechunge lweCarbopol.
I-Polyethylene Glyeol 1000